Kris Kristofferson – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Blade: Trinity (2004) နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် Blade ကသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကို ညရဲ့အမှောင်ကိုအကာ အကွယ်ယူပြီး ရှင်းထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်မဟုတ်တဲ့ တစ်ယောက်ကို သတ်မိပြီးတော့ Blade တစ်ယောက်ဂွင်ဆင်ခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့... ဘာတွေဆက်ဖြစ် မယ်ဆိုတာ ဆက်လက်အားပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။
IMDB: 5.9/10 154,337 votes
Blade II (2002) Blade II (2002) သည် သည် IMDb 6.7/10 Rotten Tomatoes 57% Roger Ebert 3.5/4 Google users 90% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Guillermo del Toro က ရိုက်ကူးထား၍ Marv Wolfman , Gene Colan တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Horror, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Blade ဆိုတာ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တွေကို လိုက်လံသတ်ဖြတ်စားသောက်နေသော သတ်ဖြတ်သူများကို ချေမှုန်းရန် သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင် အဖွဲ့နဲ့ ဖြစ်ခဲလှသော နေ့ခင်းမှတောင် သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သူထူးဆန်းသော သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်းသူရဲကောင်းတစ်ဦးအကြောင်း ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ…. Credit ...
IMDB: 6.7/10 184,754 votes
Blade (1998) Blade (1998) သည် IMDb 7.1/10 Metacritic 45% Rotten Tomatoes 54%Google users 89% ဒါရိုက်တာ Stephen Norrington ရိုက်ကူးထား၍ David S. Goyer က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Horror ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… လူတစ်ဝက် သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တစ်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ လူတွေကို မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလေရာ ဘယ်လို အက်ရှင်ထိတ်လန့်စရာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဇာတ်ကားမှ ခံစားကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ကြပါခင်ဗျာ…. Credit Review
IMDB: 7.1/10 223,771 votes